ओली आएपछि कहिल्यै नबढेको भारतसँगको हाम्रो शत्रुता बढ्यो : डा. दिक्षित - Radio Himalayan
70 जनाद्वारा पढिएकाे
काठमाडौं, १५ मंसिर । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले चीन र भारतबाट नेपालमा उच्चस्तरको भ्रमण हुनु राम्रो र सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने,‘हामी नेपालीहरु धेरै भाग्यशाली छौं, यो अर्थमा कि अहिले हाम्रा दुईवटै छिमेक एउटा सुपर पावर भईनैसक्यो ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले अर्को सुपरपावर हुन गैराखेको छ । दुईवटैको अर्थतन्त्र कोरोनाले बाहेक, धेरै फड्को मारेका छन् । हामीले अलिकति बुद्धि लगाउन सक्यौं, आन्तरिक झै–झगडा छोडेर लिनुपर्छ । हामी धेरै माथि जान सक्छौं ।’
डा. दिक्षितले नेपालका नेताहरुले आफ्नो हितलाई मात्रै हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘चीन र भारतलाई लडाएर, एक आपसमा झगडा लगाएर आफ्नो राजनीतिलाई मात्रै फाईदाको रुपमा हेर्नुहुँदैन् । हामीसँग धेरै साधन छैन् । प्रगतिको लागि हामीले भारत र चीनसँग त सहकार्य गर्नुपर्छ । भारतबाट धेरै सहयोग पाएका छौं । चीनले पनि बिआरआईमार्फत सहयोग दिन खोज्दैछ । यो हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो ।’
डा. दिक्षितले नेपालका नेता तथा सबै दलहरुले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार आफ्नो विदेश सम्बन्ध राख्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिले टप नेताहरु दुवै तिरबाट नेपाल आएका छन् । चिनियाँ रक्षामन्त्री ८ घण्टाको लागि मात्रै आउनुभएको छ । उहाँ मलाई लाग्छ, केही ठोस कार्य गर्न आएको होला । भारतका गुप्तचर विभाग रअ प्रमुख आए ।
त्यसैगरि विदेश सचिव आए । असाध्यै राम्रो तहमा हामी गाएका छौं । एउटालाई खुशी पार्न अर्कोलाई खत्तम गर्यौं भने राम्रो हुँदैन् । तर, अहिले भैरहेको छ ।’
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको उनको दाबी छ । डा. दिक्षितले भने,‘ओली आएपछि कहिल्यै नबढेको भारतसँगको हाम्रो शत्रुता बढ्यो । नेपालको भारतसँग यस्तो खराब सम्बन्ध कहिल्यैपनि थिएन ।
अहिले आएर अलिकति सुल्झाउन ओलीले पनि खोजे । भारतले पनि त्यसलाई टेवा दिएको छ । हेल्प गरेको छ । चीनसँग राम्रो देखाउन, मित्रता देखाउन भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नुहुँदैन् । नेपालले हिजोपनि यो खेल खेलेको हो । एकविरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने काम गर्नुहुँदैन् ।’
नेपाल भ्रमणको क्रममा चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाललाई सैनिक सहयोग दिन्छु भनेर गरेको घोषणालाई उनले प्रश्न गरे,‘तर, हामीलाई सैनिक सहयोग चाहिएको छ कि छैन ? यो हामीले सोच्ने कुरा हो । अहिले किन हातहतियार चाहियो ? अहिले किन गरेको हो ? अहिले त आर्थिक उत्थानको कुरा ठूलो हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी कसरी प्रभावकारी हुने ? यो कुरा प्रधान हो ।